दाँत पहेँलो छ ? उसोभए दुई मिनेटमै चम्किलो बनाउन यो उपाय अपनाउनुहोस् ! – Sandesh Press
September 3, 2021 376
८.केरालाइ पिसेर यसको पेष्ट बनाउनु होस्। यसको पेष्टले दांतलाइ दिनहु एक मिनेट मसाज गर्नुहोस, मसाज पछि दांत ब्रश गर्नुहोस। यो उपाए दिनहु गर्नाले दाँतको पहेलोपन हटेर जान्छ। चुरोटको सेबन गर्ने गर्नाले पनि दांत पहेलो हुन्छ भने कुनै खानेकुरा लगातार खानाले, उमेर बढ्दै जाँदा अनि धेरै औषधिको सेवन गर्नेहरुको पनि दात पहेलो हुन्छ
म्युजिक प्रड्युसर, भ्लगर चेतन कार्की काठमाडौं आउंदै गर्दा बीचबाटोमा पक्राउ